Ukuveliswa komgca weNdibano | XTL
Ikhaya > Inkonzo
Ukuveliswa komgca weNdibano
Sinemveliso epheleleyo yemveliso kunye nezixhobo zokuvavanya, kubandakanya umgca ozenzekelayo,
Sineqela lethu ukuba sifunde, uyilo, ukuvelisa kunye nokuthengisa.
Sidityaniswe ne-r&D, ukuvelisa kunye nokuthengisa ngokupheleleyo,
Emva kothethathethwano nomthengi, silungiselela ukuqalisa iprojekthi entsha.
1, Ukuba umthengi unomzobo, oquka imilinganiselo, izixhobo, iimfuno ezizodwa, ke sinokwenza umbungu ngokomzobo.
2, Ukuba umthengi akanamzobo, kodwa ube nesampulu, ke kufuneka isampulu kufuneka ithunyelwe kwinjineli yethu, siya kuthi emva koko siya kulinganisa ububanzi, kwaye senze umzobo. Emva koko senza ubumba ngokwemizobo.
Ngamanye amaxesha, umthengi uza kwenza isampulu yesampulu, encinci kwaye ixabisa imali ephantsi, nje yokwenza iisampulu. Ngamanye amaxesha, umthengi wenza isimo esikhulu ngokuthe ngqo, kuzo zombini ezenza iisampulu kunye nemveliso yobuninzi.
Emva kokwenza, siya kuvavanya ubumba, ukuba isisu silungile. Emva koko yenza iisampulu, injineli yethu iya kulinganisa ubungakanani beesampulu kwaye zivavanye ubulukhuni kwaye njalo, ukuqinisekisa ukuba iisampulu zisemgangathweni. Emva koko sithumela iisampulu kubathengi bethu ukuze sivavanywe.
Emva kokuba iisampuli ziqinisekisiwe, siza kuqalisa ukuveliswa kobuninzi. Ukuhamba kwemveliso njengombala:
Emva kwemveliso yobunzima kunye ne-FQC, emva koko siya kupakisha iimveliso ezisemgangathweni.
Emva koko siya kuthumela iimpahla zethu, ubungakanani obuphantsi, idla ngokutsala impahla, njenge-FedEx, i-DHL, TNT, phezulu, okanye ngomoya. Ukuba ubungakanani obukhulu, ihlala inqanawa okanye ukuthuthwa komhlaba.
Yonke imveliso inobomi beshelufa, ukuba kukho iingxaki ezisemgangathweni ngexesha loBomi baseShelsi, nceda unxibelelane nathi, sihlala silapha ukuze sikusebenzele. Asikwenzi ishishini elinye, kodwa ukufuna intsebenziswano yexesha elide, ufezekisa imeko yokuphumelela.
Singayifumana intlawulo nge-PayPal, i-Western Union, Gram yeMali, T / T, l / c; I-odolo yesampulu ye-odolo ikwiintsuku ezingama-7-10, ubungakanani be-oda ye-odolo Singakunika inkxaso yobugcisa. Kunye neGuranisi yethu eseMveliso yethu ziinyanga ezili-12.
Sityalela imali kakhulu yokuseta ilabhoratri yethu ukuqinisekisa ukuba singaza nezisombululo zabathengi ngokukhawuleza nangokufanelekileyo.
Inkqubo yokulungisa imveliso:
● Inkonzo yeOEM / ODM
Sikhetha izixhobo ngokweemfuno zemveliso yakho.
Sinikezela ngeendleko kwiiyure ezingama-24 kwaye sicwangcise ukuthunyelwa ngeentsuku ezingama-20 ukuya kwengama-30.
Ukusekwa ngonyaka ka-2009, i-liling xing tairayic couramic conramic conramic c. Inkqubo yabo yokuphuhliswa, siyaqinisekisa ukuba kuphela kwe-notch ephezulu ye-notch isetyenziswa ziingcali zethu kunye nezixhobo ze-Underra-Danze kunye noomatshini. Ngaphandle kwale nto, sijonga ezi zinto zikwizizathu ezahlukeneyo ngaphambi kokuba zithumele kwindawo abathengi bethu.